DHIRTA APPLE TREE DABIICIGA AH: SHARAXAADA NOOCYADA KALA DUWAN IYO MUUQAALADA, SAWIRADA IYO ASTAAMAHA - BEERTA
Miraha faa'iido leh dhadhanka u wanaagsan - noocyo of geedo tufaax ah dabiiciga ah dhalinyarada
Geedka tufaaxu waa geed khudradeed oo jecel ninkii beerta oo idil.
Taageerayaasha ama beeralayda waayo-aragnimo leh waxay jecel yihiin inay koraan geedkan sababtoo ah sifooyinka faa'iido leh ee midhihiisa iyo fududaanta qaraabada ee daryeesha.
Waxyaalaha kala duwan ee dabiiciga ah waa geedka tufaaxa Bisaylkiisa xilliga dayrta. Midhaha miraha waxay leeyihiin karti fiican, laakiin waxaa lagu keydin karaa sanduuqyada alwaaxda heerkulka qolka qabow illaa December.
Wixii manjooyin si fiican u habboon ee dayrta iyo qaboobaha jiilaalka.
Noocyo cayiman Dhirta dabiiciga ah
Tixgelin si gaar ah muuqaalka tufaaxa: geed iyo miro.
Sawirka sawirka waxaad ku arki kartaa waxa noocyada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee geedka tufaaxa u eg.
Dhirta dhirta Dhirta dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxaa lagu gartaa inta badan qiyaasta sare, waxay gaari kartaa ilaa afar mitir oo dherer ah.
Crohn waxay leedahay qaab isku dhafan, wuxuu leeyahay cufnaanta xooggan sabab u ah xaqiiqda ah in laamaha geedku ku yaalaan ku dhawaad ​​xagasha 90 darajo oo qiyaastii geedka tufaaxa.
Jilif ee geedka tufaaxa wuxuu leeyahay midabka madow madow, caleemaha koraan ee dhumuc dhexdhexaad ah, midabkoodu waa midab khafiif ah. Caleenta kala duwanaanshahan ayaa yar yar.
Qaabka ayaa lagu soo koobay, ilaa sare ee waraaqaha. Waqti xaadirka ah, marin qafiif ah ayaa laga arki karaa gadaasha warqadda. Ubaxyada geedka tufaaxa ah ee noocyada kala duwan waa mid aad u ballaaran, oo midabkiisu waa caddaan-casaan.
Cabbirka midhaha geedka tufaaxa ah Dhakhtar dhalinyaro ah ayaa badanaa lagu gartaa qadar yar: miisaankeedu yahay ilaa 130 garaam.
Iyo sawirkan waxaad arki kartaa tufaaxa kala duwan ee dhalinyarada dabiiciga ah:
Qaababka tufaaxu waa wareegsan, wax yar ka dib.. Midabka miro waa jaale-cagaaran, badankooda tufaaxa waxaa lagu dabooli karaa boomaal qurux badan oo casaan ah.
Meelaha subcutaneous ee midab cagaaran cirro leh, wax yar la arki karo, qadarka waa mid aad u yar.
Hilibka midhaha wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo macaan ah, cufnaanta waa mid dhexdhexaad ah, cunto qabatin iyo jilicsan, shiidan-cadaan.
Asal ahaan, miraha waxaa lagu aasaasay kolchatka.
Taariikhda xulashada waxay ka timid Machadka Cilmi-baarista ee Beerta Xoolaha I.V. Michurin. Halkaas, 1935, jaangooyuhu wuxuu adeegsanayaa habka loo marayo laba nooc: jiilaalka Welsey iyo dayrta qoraxda dhoobo, waxay soo saartay noocyo cusub oo tufaax ah - Young Physicist (foomka la soo gaabiyey - "Yunnat"). Dhirta qibrada leh ee dalagyada miraha Sergey Isaev ayaa hogaaminayey shaqadan.
Gobolka kobaca dabiiciga ah
Sanadkii 1993, noocyo kala duwan oo dhalinyaro ah ayaa laga diiwaan geliyey gobolka Volga-Vyatka. Sidoo kale gobollada koritaanka dabiiciga ah ee kala duwan ee kala duwan: Yaroslavl, Vladimir, Ivanovo gobolka. Gobollada Waqooyi waxaa lagula talinayaa beeritaanka tufaaxa kala duwan ee noocaan ah, maadaama ay ku habboon yihiin in ay ku koraan xaaladaha aan fiicnayn.
Waxyaalaha kala duwan ee "Young Physist" waxa ay ku kala duwan yihiin fruiting degdeg ah - goosashada tufaaxa waxay bilaabmaysaa in la keeno sannadka saddexaad ama afaraad ka dib markii laga beerto.
Goorma Wax-soo-saarku waa mid aad u sarreeya, midho-barar ayaa joogsatay si joogto ah, taas oo ah mid ka mid ah faa'iidada ugu weyn ee noocyada kala duwan.
Waxaad ku dili kartaa midhaha qeybta dambe ee Sebtembar, iyo Dhaqdhaqaaq buuxda oo tufaax ah ayaa yimaada horraanta Oktoobar. Tufaaxu waxay leeyihiin gaadiid aad u sarreeya, qaababka isticmaalka waa mid guud. Geeduhu waxay leeyihiin caabbinta barafka sare.
Macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee beerto iyo daryeelidda geedaha tufaaxa.
Beeraley kasta ayaa sheegi doona inuusan jirin xilli cayiman oo lagu beerayo geed tufaax ah oo ka faa'iideysan lahaa mid kale. Sharciga ugu weyn ee soo degitaanka waa waxay u baahanyihiin inay beeraan guga, marka qorraxda qoraxda aan wali wakhti u helin inay diirimaan dhulka, ama dayrta, marka aanay qabin.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo diyaarinta meesha loo dego. Si aad tan u sameyso, dooro beerta beerta ama hoyga, halkaas oo geedka tufaaxa aan weli korin (sida geedaha ka soo saara walxaha waxyeelada ah ee noocyada ay u leeyihiin carrada) iyo dhowr bilood ka hor taariikhda beerashada la filayo, qodo dalool.
Haddii ciidda ay tahay mid bacrin ah, ceelku ma aha inuu qoto dheer - qiyaastii 40 sentimitir qoto dheer iyo qiyaastii 80 sentimitir dhexdhexaad ah.
Dal dhul ah oo aan haysanin wax taajir ah, waxaad u baahan doontaa dalool ku saabsan 80 sentimitir qoto dheer, iyo dhexroorka waa inuu ka yar yahay mitir.
Qodbo god, waa lagama maarmaan in lakabka sare ee ugu hooseeya laga soo dhajiyo xagga hoose, tan ugu horraysa waa mid bacrin ah.
Lakabka ugu hooseeya ayaa loo baahan doonaa booska budada ee ku wareegsan seedling. Sadarka saddexaad ayaa marka hore lagu aasaa lakabka ugu sarreeya iyada oo aan lagu darin, kadibna lagu qasi jiray Bacriminta (macdanta ama organic). Hillooga yar waa inuu kor u sii qaadaa godadka - tani waa lagama maarmaan, ka hor inta aan la beeriin ciidda waxay leedahay waqti ku filan oo qoyaan iyo qoyaan.
Marka taariikhda beerto ay ku habboon tahay, seedling waa in la nadiifiyaa laga soo jaray saqafyo iyo jilif. Waxaa fiican inaad u geed gashato - sidaas darteed waxaad si fiican u beeran kartaa iyada oo aan waxyeelayn nidaamka xididka.
Geeduhu waxay u baahanyihiin inay ku faafaan buuraha, si ay ugu habboonaadaan heerka dhulka. Isla markiiba beeritaanka, geedka waa in lagu waraabiyaa laba ama saddex baaldiyo oo biyo ah. Waa suurad wacan in lagu xiro seedling a peg, kaas oo horey loo sii dhigay hareeraha.
Si aad ugu qanacdo beergooyska, geed kasta oo tufaax ah wuxuu u baahan yahay daryeel habboon iyo waqti go'an.
Xilliga jiilaalka, geedka waa in laga ilaaliyaa barafka iyo jiirka.. Si tan loo sameeyo, jirku wuxuu ku xiran yahay qoryaha ama laanta geed. Waxaad sidoo kale dabooli kartaa hoosta geedka ama caleemaha dhacday, ama digada yaryar.
Guga waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro manjooyin nadaafadeed oo ah geedo tufaax ah: bukaanka bukaanka ah, ama dhaawacmay ama la qalajiyey waa in laga saaraa oo la burburiyaa.
Markaasaa meesha gooyaa waxaa lagu baari doonaa garoonka beerta.
Gooyaa waxay gacan ka geysataa hagaajinta koritaanka iyo dhalidda., hagaajinaysaa tayada miraha.
Sidoo kale guga, waxaa lagama maarmaan ah in qoryaha otpattyvanie, sidaas darteed jiirka jahannamo ka dib jiilaalka ma weeraraan jilif ee geedka.
Si loo hubiyo ilaalinta, waxaa suurtagal ah in lagu sumoobo sunta ka hor bilawga jiilaalka, maadaama aysan mar kasta suurtogal ahayn in lakabiyo lakabka barafka ku wareegsan geedka.
Ha iloobin inaad quudiso tufaaxa. Organic, iyo sidoo kale Bacriminta oo ku jira fosfooraska ama potassium, waa in la isticmaalaa seddexdii sano ee kasta xilliga dayrta, iyo nitrogenous guga.
Inta lagu jiro xilliga beergooyska, hubi in laamihii geedka tufaaxa aan la kulmin culeys weyn oo ka imanaya midhaha, maadaama ay jirto khatarta laanta jaban. Si arrintan loo sameeyo, waxaad rakibi kartaa qalabka.
Fasalka Dhalinyarada caan ku ah ciladaha daciifka ah ee ku dhaca qolofta, xitaa xilliga ugu caansan.
Khatarta ugu weyn ee geedaha tufaaxa ayaa weli ah cayayaanka oo si xun u kharribi kara caafimaadka kaliya ee geedka tufaaxa, laakiin sidoo kale dhalidda: Tufaaxu waxay luminayaan soo bandhigidooda, iyo qaar ka mid ah cayayaanka ayaa awood u leh inay ka celiyaan geedka miraha.
Si loo xakameeyo cayayaanka, kiimikooyinka ayaa loo baahnaan doonaa, tusaale ahaan, birta ama copper sulphate, isku dar ah Bordeaux, oxychloride copper. Daryeel dheeraad ah ayaa sidoo kale loo baahan yahay - nadiifinta waqtiga cayayaanka, daaweynta dhirta qoryaha, nadiifinta nadiifinta iyo xaaqidda. Cayayaanka ugu caansan waa:
Cayayaanka Tani waa khatar ah sababtoo ah waxay waxyeello u geystaa kelyaha, iyo burooyinkuna waxay dhigtaa ukumaheeda.
Calaamad muujinaysa muuqaalka cayayaankan waa dhibcaha casiirka kelyaha iyo burooyinkeeda aan caleemaha lahayn, caleemaha.
Dagaalka ka soo horjeeda waa inuu dhacaa marka kelyuhu ay bararaan. Cayayaanka ayaa u baahan in la gooyo geedka, oo hore u faafay dabaasha u dhow. Marka, marka ubbooyinku bilaabaan inay ubaxlaadaan, geedkii tufaaxa waa in lagu buufiyaa iyadoo lagu buufin karo 0,2% oo ah xashiishka.
Cayayaankaani waxay si buuxda u cunaan ugxan-yaraha, waxay geli karaan tufaaxa. Si loola dagaallamo geedka waxaa lagu daaweeyaa karbofos ka hor inta aan la jarin tufaaxa.
Cayayaankaasi waxay burburin karaan midhaha gudaha, markaa tufaaxu waxyeelo ayuu ku dhici karaa.
Waa lagama maarmaan in la bilaabo la dagaalanka aboorka aboorka guga hore, nadiifinta jilifka geedka.
Sidoo kale ka dib geedkii tufaaxu hoos u dhacay, waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo xal gaar ah: 40 garaam oo lime ah ayaa loo baahan yahay 30 grams oo calcium arsenate ah. Isku daridan waxaa lagu kala diraa baaldi biyo ah.
Tallaabooyinkani waxay ka caawin doonaan in ay ka fogaadaan waxyeelada geedka tufaaxa.
Dhirta Apple A khabiir dhalinyaro ah ayaa leh faa'iidooyin badan: tufaaxu waxay leeyihiin bandhig sarraysa, dhalid hufan, geed ayaa leh hiddo-khaas ah oo ka soo horjeeda caabuq. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira cillado: leh dhalid korodhka, fruiting noqdaan kuwo aan caadi ahayn.